Isku Aadkii Wareega 8aad Ee Champions League - Cakaara News
Isku Aadkii Wareega 8aad Ee Champions League
Jigjiga (Cakaaranews) Sabti 19ka march 2016 waxaa goordhow magaalada Nyon ee dalka Switzerland lagu qabtay isku aadka wareega 8da ee Champions League iyadoo ay ka soo baxeen kulamo xiiso leh, kulamada ugu adag ee wareegaan waxaa ka mid ah marka ay isku dhaceen kooxaha reer Spain ee Barcelona iyo Atletico Madrid, halka PSG ay mar kale wajihi doonto koox Ingariis ah Manchester City.
Kooxda ugu guulaha badan koobkaan ee Real Madrid ayaa iyadana heshay kulan ay dad badan
u arkaan inuu sahlan yahay iyagoo ku soo aadankoox aan qibrad badan u laheyn koobkaan oo
markii ugu horeysay abid soo gaartay wareega sideeda waa kooxda Jarmalka ee Wolfsburg, halka kooxda kale ee Jarmalka ee Bayern Munich ay wajaheyso kooxdii la wada doonayay ee reer Portugal ee Benifica.
Barcelona ayaa u baahnaan doonta inay ka gudbaan kooxda mayalka adag ee macalin Diego Simeone ee Atletico Madrid si ay u gaaraanwareega 8da waxaana lugta hore oo la ciyaarayo 5ta ama 6da April lagu hormarayaa garoonka Camp Nou ee kooxda Blaugrana.Kulankoodii ugu danbeeyay ee Champions Leaguewaxa uu ahaa wareega 8da xilli ciyaareedkii 2013-14 markaasoo Atletico Madrid ay reebtaykooxda Barcelona.
PSG oo koobkaan ka reebtay Chelsea ayaa fursad uheli doonta inay koox kale oo Ingariis ah reebto madaama ay ku soo aadeen koox Man City oomarkii ugu horeysay wareegaan ciyaareysa, laakiin City ma awoodi doontaa inay u aargudo kooxdii Ingariiska ee dhibanaha u soo noqotay PSG. Labada kooxood ayaa hal ujeedo leh inay markoodii ugu horeysay abid gaaraan semi-finalka.
Lugta hore ee wareega 8da waxaa la ciyaaridoonaa 5ta iyo 6da April halka lugta labaad la
ciyaari doono kooxda 12.